Nokia7Plus ကိုစက်တင်ဘာလတွင် Android Pie ရရှိမည်ဖြစ်သည်
ယမန်နေ့ကတောင်အာဖရိကမှကျွန်ုပ်တို့ဆီသို့သတင်းများရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက Huawei P20 သည် Nokia7Plus အားစက်တင်ဘာလတစ်လလုံးတွင် Android Pie သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ Snapdragon 660 ပါ ၀ င်သောပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Tronsmart Element Pixie ကိုလေ့လာပြီးဒီဇိုင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းနှင့်စွမ်းအင်များစွာပေးသော Bluetooth စပီကာဖြစ်သည်။
Caviar က Samsung Galaxy Note9ကိုအနောက်ကီလိုဂရမ်နဲ့ယူထားပြီးယူရို ၅၀,၀၀၀ နဲ့ကျောဘက်မှာရွှေကီလိုဂရမ်ပါရှိပါတယ်။ ရှာတွေ့သည်!
Galaxy Note9သည် JerryRigEverything ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုကိုအောင်မြင်သည်။ Samsung high-end ကိုစစ်ဆေးခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OUKITEL K27 ကို ၂၀% လျှော့စျေး၊ ၆ လက်မမျက်နှာပြင်၊ 8 GB RAM၊ 20 ROM နှင့် dual dual camera တို့ပါ ၀ င်သည်။
Huawei Mate 20 တွင်နောက်ကင်မရာသုံးဆထည့်သွင်းထားသည်
Huawei Mate 20 တွင်နောက်ကင်မရာသုံးဆထည့်သွင်းထားသည်။ ဆောင်း ဦး ရာသီရောက်သည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Vivo X23 ၏ပုံရိပ်အသစ်များ
Vivo X23 ၏နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းကို notch နှင့် dual camera တို့ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ မကြာမီရောက်လာတော့မည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
အမှတ်တံဆိပ်၏နောက်ထပ်မိုဘိုင်းလ်မျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် Honor 8X တည်ရှိမှုကို Honor မှအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည် ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
Xiaomi Pocophone F1 သည် 8GB RAM ပါဝင်သည့် Geekbench ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ ဒီအခြေခံစံနှုန်းအသစ်အကြောင်းထပ်မံလေ့လာပါ။
သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် Samsung မှကိုးရီးယားများသည်တိုးတက်မှုအတွက်ဈေးကွက်သို့လာသည့် Galaxy Note9အသစ်ကိုတရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့သည်ကိုရီးယားမီဒီယာအများအပြား၏အဆိုအရ Galaxy Note9၏သိုက်သည် Galaxy S9 ရရှိသောပမာဏထက်များနေသည် တရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ZTE သည် Axon9ကိုဆက်ခံသူဖြစ်သော Axon7ကိုလွှတ်တင်လိုက်ပြီဟူသောပိုစတာကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သိုလှောင်ထားရာများကိုရှာဖွေပါ။
Huawei P20 ကိုစက်တင်ဘာလတစ်လျှောက်လုံး Android Pie သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်
ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး သည် terminal အသစ်တစ်ခုကိုနှစ်တိုင်းဖွင့်တိုင်းနှစ်၏မည်သည့်အချိန်၌မူတည်သည်၊ အမြန်နှုန်းကိုထည့်တွက်စဉ်းစားသောအသုံးပြုသူများသည်တောင်အာဖရိကရှိ Huawei ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်း Huawei P20 သည် Android P တစ်လျှောက်လုံးကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ စက်တင်ဘာလ
Nokia9ကင်မရာ၏ပထမဆုံးဓါတ်ပုံများမှာဒီနေရာတွင်ဖြစ်သည်။ အဆင့်မြင့်ကင်မရာဖြင့်ရိုက်ကူးထားသောဤဓါတ်ပုံများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi MIX3တွင်စီစစ်ထားသောအသစ်သောပြန်ဆိုချက်များသည်လအနည်းငယ်အတွင်းရောက်ရှိလာမည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ပုံစံသစ်ကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei Nova3နှင့် Nova 3i တို့ကိုလာမည့်သီတင်းပတ်အတွင်းအိန္ဒိယတွင်စတင်ရောင်းချလိမ့်မည်။ ရှာတွေ့သည်!
IFA 20. တွင် Huawei P2018 Pro သည်အရောင်သစ်နှစ်မျိုးကို IFA XNUMX. တွင်ထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဗားရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei Mate 20 Lite တွင် Kirin 710 ပရိုဆက်ဆာနှင့်သယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီမှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံလာပါ။
ZTE သည် Axon9ကို IFA 2019 တွင်ပြသခဲ့သည်
ZTE သည် IFA 9. တွင် Acon 2018 ကိုတရားဝင်တင်ဆက်တော့မည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်လာမည့်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Motorola One သည် TENAA ကိုဖြတ်သန်း။ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုဖော်ပြသည်
Motorola One သည် TENAA ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ ဒီဇိုင်းနှင့်ဤဖုန်း၏ထင်ရှားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
OnePlus 6T ကိုစျေးနှုန်းများပါ ၀ င်သောအောက်တိုဘာလတွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်အသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Android 9.0 Pie ရရှိမည့်ဖုန်းများ၏ရက်စွဲနှင့်ရက်စွဲကို Sony ကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီ OS အသစ်ကိုနှစ်သက်မယ့်ကိရိယာတွေကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Motorola One သည် Geekbench တွင်၎င်း၏အဓိကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအချို့နှင့်အတူပေါ်လာသည်။ ဒီမိုဘိုင်းနှင့်အတူပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုသိ!
Sony Xperia XA3 Plus သည် Geekbench Benchmark တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဒီနောက်ဖုန်းနဲ့ငါတို့အတွက် Sony အတွက်ဘာတွေသိုလှောင်ထားတယ်ဆိုတာရှာဖွေပါ။
DisplayMate ၏အဆိုအရ Galaxy Note9၏မျက်နှာပြင်သည်တယ်လီဖုန်းလောကတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကထုတ်လုပ်သူများသည်နှစ်စဉ်တီထွင်မှုများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်ခြင်းနှင့် Samsung Galaxy Note9၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လောင်းရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည် Samsung ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်အကောင်းဆုံး panel ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
Huawei ၏ Kirin 980 တွင် Cortex-A77 cores များမပါရှိသော်လည်း ARM ၏ Cortex-A76
Huawei ၏နောက်ထပ်ပရိုဆက်ဆာဖြစ်သော HiSilicon Kirin 980 တွင် Cortex-A77 Core လေးခုတပ်ဆင်ထားမည်မဟုတ်သော်လည်း Cortex-A76 cores လေးခုပါရှိသည်။ ရှာတွေ့သည်!
Huawei Nova3သည်ရောင်းချခဲ့ရသည့်စီးရေနှစ်သန်းအထိရှိသည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏မော်ဒယ်သစ်များ၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ထုတ်လုပ်သူတိုင်းအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောကြောင့်ဒီသီချင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မပျော်သင့်ပါ၊ သို့သော်များစွာသောလူများမရှိခြင်းကြောင့်၎င်းကို Galaxy S8 / S9 တွင်မီးမောင်းထိုးပြထားပါတယ်။
Mbuynow ၏နားကြပ်ဖြစ်သည့် Touch TWS သည်တန်ဖိုးနည်းသောအရည်အသွေးနှင့်စွမ်းအားဖြင့်တန်ဖိုးနည်းသော Apple Airpods ပုံစံနားကြပ်များဖြစ်သည်။
ဒီ Mbuynow IP HD ကင်မရာကပေးတဲ့အရာအားလုံးကိုကြည့်ဖို့သင်အကြံပေးလိုပါတယ်။
Google ကဒီနှစ်မှာဖန်သားပြင်ပါတဲ့စပီကာကိုစတင်မယ်။ ဒီနှစ်ကျရင်လာမယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့စပီကာအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အသစ်ပေါက်ကြားလာတဲ့ Motorola One Power အမှတ်တံဆိပ်၏ Android One ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Nokia ကသြဂုတ်လ ၂၁ ရက်တွင်၎င်း၏ဖုန်းအသစ်ကိုပြသသွားမည်ဖြစ်သည်
Nokia ၏ဖုန်းသစ်ကိုသြဂုတ်လ ၂၁ ရက်တွင်ပွဲထုတ်မည် အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်း Nokia 21 ဖြစ်နိုင်သည်။
Nokia7Plus သည်အကောင်းဆုံးစားသုံးသူဖုန်းအမျိုးအစားတွင် EISA ဆုကိုရရှိခဲ့သည်
Nokia7Plus သည်စျေးကွက်တွင်အများဆုံးထောက်ခံသည့်မိုဘိုင်းအတွက် EISA ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ဒီအရေးကြီးတဲ့ဆုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Galaxy Note 8 သည်securityဂုတ်လလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ patch ကိုရရှိသည်
August security patch သည် Galaxy Note 8 သို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးယနေ့ခေတ် Samsung ၏ high-end ကိုကျော်လွှားနိုင်သည့် patch အကြောင်းလေ့လာပါ။
Google Coach: Google ရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးလက်ထောက်။ မဝေးတော့သောအနာဂတ်ကာလ၌ကုမ္ပဏီစတင်မိတ်ဆက်သောလက်ထောက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Vivo X23 ၏အဓိကကျသည့်အချက်များမှာ 3D မျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်
Vivo X23 ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကို၎င်းကိုမတင်ပြမီစစ်ထုတ်သည်။ ဒီမိုဘိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဘာတွေယူဆောင်လာမလဲဆိုတာကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
Honor 8X: Honor အသစ်ဖုန်းအသစ်ထွက်ပေါ်လာ
Honor 8X ၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းဖုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သူများမှပိုမိုကြီးမားသောမြင်ကွင်းတွင်ထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်သည်။
Huawei Mate 20 ကိုအောက်တိုဘာလတွင်ရောင်းချမည်
Huawei Mate 20 ကိုအောက်တိုဘာလတွင်တရားဝင်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်ကျရင်ရောက်မယ့်တရုတ်ကုမ္ပဏီကနေဖုန်းအသစ်အကြောင်းနောက်ထပ်ရှာပါ။
Samsung သည်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီဖြစ်ရုံသာမကကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 5100G modem ဖြစ်သော Exynos5ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့မှသတင်းကိုတိုးချဲ့!
Xiaomi Mi A2 မှယခုလနှင့်သက်ဆိုင်သောနောက်ဆုံးသတင်းကိုရရှိသည်။
Moto P30: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်ပစ်လွှတ်ခြင်း။ ယနေ့မိတ်ဆက်ခဲ့သော Motorola ၏ပထမဆုံး notch ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Pocophone F1 သည်၎င်း၏ပြိုင်ဆိုင်မှုကို Geekbench တွင်ဖျက်စီးသည်
Xiaomi Pocophone F1 ၏ပထမဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုသည် Geekbench တွင်ပေါ်လာသည်။ ရလဒ်သည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်
IFA2တွင်မိတ်ဆက်မည့် BlackBerry KEY2018 LE
IFA2တွင် BlackBerry KEY2018 LE ကိုတရားဝင်တင်ဆက်လိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီဖုန်းအသစ်၏တင်ဆက်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OPPO F9 Pro ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
OPPO F9 Pro အသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်သည်။ တစ်ပတ်အတွင်းတင်ပြသောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ
Xiaomi Mi Pad4Plus သည် ၁၀.၁ လက်မမျက်နှာပြင်၊ ၈,၂၆၀ mAh ဘက်ထရီနှင့်အခြားအရာများဖြစ်သည်
Xiaomi သည်တက်ဘလက်အသစ်ဖြစ်သော Mi Pad4Plus ကိုတရားဝင်ထုတ်လုပ်လိုက်သည်။ ၎င်းသည် ၁၀.၁ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် 10.1mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည်။
Huawei ၏နောက်ထပ်ပရိုဆက်ဆာဖြစ်သော HiSilicon Kirin 980 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ယိုစိမ့်လျက်ရှိသည်။ ဤ SoC အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ဤရွေ့ကား Android 9.0 Pie ရှိသည်သောပထမ ဦး ဆုံး Nokia ဖုန်းများဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘယ်မော်ဒယ်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ကိုရှာဖွေပါ။
Samsung ၏ခေါက်နိုင်သောဖုန်းမှာခန့်မှန်းထားသည်ထက်စောပြီးရောက်လာသည်။ ဤဖုန်း၏ရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းသတင်းပို့သောကောလာဟလများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ
Motorola Moto P30 ၏ပထမဆုံးပြန်ဆိုချက်များကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်ကူးရှိတယ်။
Xiaomi Redmi6နှင့် Redmi 6A တို့သည်စပိန်သို့ရောက်ရှိလာသည်
Xiaomi Redmi6နှင့် Redmi 6A တို့ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချသည်။ အနိမ့်ဆုံးဖုန်းနှစ်လုံးကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi သည်အိန္ဒိယရှိရောင်းအားတွင် Samsung ထက်သာလွန်သည်
Xiaomi သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Samsung ဖြစ်သည်။ ပို၍ အရေးကြီးသောစျေးကွက်ဖြစ်သည့်အိန္ဒိယတွင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏အရောင်းအဝယ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Alcatel7ဟာအခုတရားဝင်ဖြစ်နေပြီ
Alcatel 7: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်စတင်ခြင်း။ ယနေ့မိတ်ဆက်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီမှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Oppo R17 သည် ၆.၄ လက်မအရွယ်ရှိပြီး Notch, SD6.4 နှင့်အထက်ဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Oppo R17 ကိုကုမ္ပဏီ၏၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းအသစ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေပါ။
Samsung Galaxy Note9၏နောက်ခံပုံများကို Download လုပ်ပါ
terminal အသစ်တစ်ခုသည်စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိတိုင်းအချိန်တိုင်းတွင် Galaxy Note9တင်ဆက်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်နောက်ခံပုံအသစ်များကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက Galaxy Note XNUMX တွင်ပါ ၀ င်သည့်နောက်ခံပုံများကိုကြည့်ရှုသူများပြားလှသော Android သုံးစွဲသူများသည်၊ ထို့နောက်သင် download လုပ်ရန်လင့်များကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။ သူတို့ကို။
OUKITEL WP2: ရေကိုအကောင်းဆုံးခံနိုင်သည့်ဖုန်း
OUKITEL WP2: ရေစိုခံအများဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာလတွင်ရောက်ရှိလာမည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဤပုံစံအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
POCOPHONE F1 ကိုသြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်
POCOPHONE F1 ကိုအိန္ဒိယတွင်သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်တင်ဆက်မှုရက်စွဲအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Pixel XL အသုံးပြုသူများသည်အလျင်မြန်ဆုံးအားသွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြproblemsနာများရှိသည်။ Android 9.0 Pie သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်ပြproblemနာအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Samsung Galaxy Note9ဘက်ထရီသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုလုံခြုံသည်။ ဘက်ထရီကိုကာကွယ်ရန်ကုမ္ပဏီမှလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အဆင့်များအကြောင်းကိုလေ့လာပါ။
Huawei Mate 20 Lite ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ပုံများကိုစစ်ထုတ်သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏ပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်လက်ကိုင်ဖုန်းဖြစ်သော Blackberry KEY2 LE ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်ထားသည်
KEY2 ၏သေးငယ်သောမူကွဲဖြစ်သော Blackberry KEY2 LE ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ မင်းတို့သိအောင်ငါတို့ပြောတယ်။
ZTE သည် 5G ကိုစမ်းသပ်နေပြီးဖြစ်သည်
ZTE သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပထမဆုံး 5G စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်ဟုသောဤနည်းပညာ၏တိုးတက်မှုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
OPPO Find X Super Flash ကိုသြဂုတ်လ ၁၇ ရက်တွင်တရုတ်ပြည်တွင်ဖြန့်ချိမည် ဖုန်း၏ဤဗားရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက။
Sony Xperia XZ3 ၏ကောလာဟလအသစ်သည်ကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှကျွန်ုပ်တို့ထံရောက်ရှိလာသည်။ ၎င်းသည်ဤကိရိယာ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြစ်နိုင်သည်။
OPPO Find X Lamborghini သည်တရုတ်နိုင်ငံသို့လေးစက္ကန့်အတွင်းရောင်းချခဲ့သည်။ ကိရိယာ၏ဤဗားရှင်း၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Android 9.0 Pie ကိုရရှိတော့မည့် Sony ဖုန်းများ နောက်ဆုံးသတင်းကိုလက်ခံရရှိမည့်သူသည်မည်သည့်မော်ဒယ်များဖြစ်သည်ကိုရှာဖွေပါ။
Motorola ကသြဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင် Moto P30s ကိုပြသမည်။ မကြာမီရောက်ရှိလာမည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Samsung ကသူ့ရဲ့ကြော်ငြာတွေမှာ Apple ကိုထပ်မံစွဲချက်တင်ပါတယ်။ Galaxy Note9၏ကြေငြာချက်များနှင့်အတူကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏ဝေဖန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Black Shark နှင့်အခြားသူများဖြစ်သည့်ဇူလိုင်လတွင် AnTuTu ကကျွန်ုပ်တို့အားယခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်စွမ်းအားအရှိဆုံးစမတ်ဖုန်း ၁၀ ခု၏အဆင့်ကိုခေါ်ယူသည်။
Xiaomi Mi A2 နှင့် Mi A2 Lite ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချသည်။ စပိန်နိုင်ငံသို့ဖုန်းနှစ်လုံးရောက်ရှိခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
နည်းနည်း - Xiaomi ၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်အသစ်။ ဒီနေ့ခေတ်တရုတ်ကုမ္ပဏီမှတင်ပြခဲ့တဲ့ဒီအမှတ်တံဆိပ်အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Netflix သည် HD / HDR သဟဇာတဖြစ်သောဖုန်းများစာရင်းကိုအသစ်ပြောင်းသည်။ မည်သည့် Android ဖုန်းများအသိအမှတ်ပြုခံရသည်ကိုရှာဖွေပါ။
Palm က Android ဖုန်းလေးတစ်လုံးကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ စျေးကွက်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိမည့်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Bixby 2.0 - Samsung ၏လက်ထောက်ကိုသက်တမ်းတိုးသည်
Bixby 2.0 - ဆမ်ဆောင်း၏လက်ထောက်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီးသက်တမ်းတိုးသည်။ Korean Signature Wizard သို့ပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ၁ မှ YI အိမ်သုံးကင်မရာမိသားစု Pack 2
YI Home Camera ကို 2-in-1 "family pack" ဖြင့်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးပြီးအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခု
Samsung Galaxy Watch - Samsung ၏နာရီအသစ်များ
Samsung Galaxy Watch: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ ယနေ့တင်ပြသောကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်မှနာရီအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy Note9ကို Orange of Spain တွင်ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး RAM နှင့် ROM နှစ်မျိုးရှိသည်။
Samsung ကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးစမတ်စပီကာကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး၎င်းကို Galaxy Home လို့ခေါ်တယ်။ ၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ကိုယ်ပိုင်လက်ထောက် Bixby နှင့်အတူလာသည်။
Samsung Galaxy Note 9: အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ
လပေါင်းများစွာကောလဟာလများအပြီးတွင်သြဂုတ်လ ၉ ရက်သည်နောက်ဆုံးတွင်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ Note range ကိုနှစ်သက်သူများအားလုံးသည်ကိုးရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung ကယခုနှစ် Galaxy Note9သစ်ကိုယခုတရားဝင်ပြသလိုက်ပြီလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ ။
Huawei Mate 20 တွင် ၄,၂၀၀ mAh ဘက်ထရီရှိသည်
Huawei Mate 20 တွင် ၄,၂၀၀ mAh ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုထားသည်။ ဒီနှစ်ကျရင်ရောက်မယ့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးအကြောင်းပါ။
Huawei သည် Android 9.0 Pie ကို၎င်း၏ဖုန်းလေးလုံးတွင်စမ်းသပ်သည်
Huawei သည်ဖုန်းလေးလုံးအတွက် Android 9.0 Pie ကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်ပြင်ဆင်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Mi 8X သည် 3C အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သုံးမျိုးထွက်ပေါ်လာသည်
ယိုစိမ့်မှုအသစ်အရ Xiaomi Mi 8X တွင်မူကွဲနှစ်ခုရှိနိုင်သည်။ Mi 8 နှင့် Mi 8 SE ဖြစ်နိုင်သည်။
10 BQ ဖုန်းများသည် Android 9.0 Pie သို့အဆင့်မြှင့်မည်
BQ မှဖုန်း ၁၀ လုံးကို Android 10 Pie သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်။ operating system ဗားရှင်းအသစ်ကို update လုပ်နိုင်မည့်ဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Aliegocube X တက်ဘလက်ကို Indiegogo တွင်ဒေါ်လာ ၂၁၉ ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်
တက်ဘလက်များအတွက်စျေးကွက်, ထုတ်လုပ်သူအားလုံးသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာမော်ဒယ်များစျေးကွက်မှဖြန့်ချိသောပထမ ဦး ဆုံးကာလပြီးနောက်, လျှော့ချခဲ့သည်ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာ၏ပြီးနောက်, Alldocube X သည် Indiegogo တွင်ရရှိနိုင် crowdfunding ၏ကုမ္ပဏီမှတဆင့်ကြိုတင်မှာကြားထားဘို့ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
Asus Zenfone Max Pro သည်မကြာမီစပိန်သို့ရောက်ရှိမည်။ ASUS ဖုန်းသစ်ကို၎င်းင်း၏ operating system အနေဖြင့်အသုံးပြုသည်။
စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ၀ ယ်သောအခါသုံးစွဲသူများစွာသည်အချက်များအမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသည်။ အထူးသဖြင့် Oukitel အာရှကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သည့်စျေးကွက်သို့ terminal အသစ်တစ်ခုကိုစျေးကွက်သို့စတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
Aermoo B3 Bluetooth နားကြပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Aermoo B3 နားကြပ်ကိုစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်သင့်အားဒေတာအားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံများကိုရက်အနည်းငယ်ပြောပြမည်။
ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ြွကင်းများသည် IFA 2018 တွင်၎င်း၏စမတ်နာရီသစ်ကိုပြသမည်ဖြစ်သည်
Fossil က၎င်း၏စတုတ္ထမျိုးဆက်စမတ်နာရီကို IFA 2018. တွင်ပြသမည်။ မကြာမီလာမည့်ထုတ်လုပ်သူ၏နာရီအသစ်များအကြောင်းထပ်မံလေ့လာပါ။
Qualcomm မှစက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်တွင်၎င်း၏စမတ်နာရီသစ်ကိုမိတ်ဆက်မည်။ တံဆိပ်၏ Snapdragon အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အချို့သော Samsung ဖုန်းများသည် Android Oreo ရရှိရန် 2019 အထိစောင့်ရမည်
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် Samsung သည် Android ဖုန်းများကို Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်။
ဓာတ်ပုံအသစ်များနှင့် PocoPhone F1 အကြောင်း
သတ်မှတ်ချက်အသစ်များနှင့် PocoPhone F1 နှင့်ပတ်သက်သည့်ဓာတ်ပုံများပေါက်ကြားခြင်း Xiaomi အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Meizu 16s များသည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကြိုတင်မှာကြားထားမှုတစ်သန်းရှိခဲ့သည်။ ဒီမော်ဒယ်တွေရဲ့အောင်မြင်မှုအကြောင်းသူတို့ကိုမတင်ပြခင်မှာရှာဖွေပါ။
Android ဖုန်းတော်တော်များများမှာ "OK, Google" ဆိုတဲ့ command နဲ့ပြproblemsနာတက်တယ်။
Android ဖုန်းများသည် "Ok Google" command ကို သုံး၍ မရပါ။ အသုံးပြုသူများစွာအပေါ်သက်ရောက်သောဤ bug အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Essential Phone သည် Android 9.0 Pie သို့မွမ်းမံသည်
Essential Phone သည် Android 9.0 Pie သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်သည်။ အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုပထမဆုံးရရှိသည့်ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Google Pixel3ကိုအောက်တိုဘာ ၄ ရက်တွင်တင်ပြမည်။ Google ဖုန်းများ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi သည်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်၏ Android ထုတ်ကုန်သစ်ဖြစ်သော Qin AI ကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီး ၂၅ ယူရိုခန့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အဲဒါကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Huawei Mate 10 သည်ယူနစ် ၁၀ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့သည်
Huawei Mate 10 ၏စီးရေ ၁၀ သန်းကျော်ရောင်းချပြီးဖြစ်သည်။
ဤကမ်းလှမ်းချက်၏အားသာချက်ကိုယူပြီး Chuwi Hi9Pro ကိုဒေါ်လာ ၁၃၉.၉ ဖြင့်သာအကန့်အသတ်ဖြင့်ဝယ်ပါ
မှန်ပါသည်၊ ကျောင်းသို့ပြန်ရန်အတွက်တစ်လခန့်သာကျန်ရှိသေးသော်လည်းများစွာသောဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ မကြားလိုသောကျောင်းသားများရှိနေသော်လည်း အကယ်၍ သင်သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောတက်ဘလက်တစ်ခုကို ၀ ယ်ရန်ကမ်းလှမ်းမှုကိုစောင့်နေခဲ့လျှင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောစျေးနှုန်းထက်ပိုသော Chuwi Hi9 Pro သည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်
Xiaomi Mi MIX 2S သည် Android P. ကိုတိုက်ရိုက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ မကြာမီဖုန်းပေါ်သို့ရောက်ရှိလာမည့်အသစ်ပြောင်းခြင်းအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Galaxy Note9၏ပထမဆုံးကြေငြာချက်ကိုစစ်ထုတ်သည်
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအထူးသဖြင့် Samsung အကြောင်းပြောလျှင်၊ ရက်အနည်းငယ်သာလိုတော့သည်။
Motorola သည် Moto Z3 ကိုဘေးထွက်လက်ဗွေဆင်ဆာနှင့် 5G အတွက် Moto Mod တို့နှင့်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Moto Z3 ကိုတရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့ပြီးအသေးစိတ်များ၊ ဘေးဘက်ရှိလက်ဗွေရာအာရုံခံကိရိယာနှင့် 5G ကွန်ယက်အတွက် Moto Mod တို့ကိုပြောပြပါမည်။
Xiaomi Mi 8 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်သြဂုတ်လ ၈ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်စတင်မည့်နေ့အကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်က Samsung သည် Snapdragon4ပရိုဆက်ဆာတပ်ဆင်ထားသောကုမ္ပဏီ၏အကောင်းဆုံးတက်ဘလက်ဖြစ်သော Galaxy Tab S835 ကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ Samsung က၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့တက်ဘလက်အသစ်ကိုခေါ်လာသည်။ ၎င်းသည် Galaxy Tab A 10.5 ဖြစ်ပြီး Qualcomm မှရှစ် core Snapdragon 450 စွမ်းအားဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သောကိရိယာဖြစ်သည်။
တရား ၀ င်တင်ဆက်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း Samsung က Galaxy Note9ကိုကြိုတင်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်
သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် Samsung ကုမ္ပဏီမှ Samsung Galaxy Note9ကိုတရားဝင်တင်ဆက်ပြသမည်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအများစုသည်ရောင်းချရန်မရှိသေးသော်လည်း Samsung Galaxy Note9ကို Samsung တွင်သိမ်းဆည်းထားပြီးဖြစ်သည် အမေရိကန်။
Galaxy Note9ကို MobileFun မှပေါက်ကြားသောဗွီဒီယိုတစ်ခုတွင်တွေ့ရသည်
Galaxy Note9၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုအတွက်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သာကျန်သေးသော်လည်းဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုများပေါ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Galaxy Note9၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုကြည့်လိုပါက MobileFun မှယောက်ျားများသည်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်သည် Note အကွာအဝေး၏မျိုးဆက်သစ်၏။
OPPO F9: ထစ်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည်အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်
OPPO F9: အထူးထစ်ချပ်နှင့်အတူအလယ်အလတ်တန်းစားသစ်။ မကြာမီစျေးကွက်တွင်ရောက်ရှိတော့မည့်ထုတ်လုပ်သူမှဤပုံစံအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Huawei Mate 20 Pro အသစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က OnePlus သည်၎င်း၏ update ကိုအချိန်ဇယားကိုကြေညာခဲ့သည်။
Oukitel WP2 သည် WP10000 ၏ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်သည်
Oukitel ကုမ္ပဏီသည်ကြီးမားသောစွမ်းရည်ရှိသည့်ဘက်ထရီပါသောဖုန်းအမျိုးမျိုးကို ...
Gorilla Glass နှင့်အပြိုင်ပြိုင်ဘက်ကင်းသည့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုကို Samsung ကဖန်တီးသည်။ ကိုရီးယားအမှတ်တံဆိပ်ဖန်တီးခဲ့သောပြတ်တောက်နိုင်သောမျက်နှာပြင်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်အခြားသောထုတ်လုပ်သူများနည်းတူများသောအားဖြင့် Apple ၏ iPhone ကိုရည်ညွှန်းရန်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung မှကြေငြာချက်အသစ်သုံးခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ဖော်ပြချက်အသစ်သုံးခုကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ အိုင်ဖုန်း
OnePlus6၏အလိုအလျောက်တောက်ပမှုသည်ပြcausingနာများဖြစ်စေသည်
အလိုအလျောက်တောက်ပမှုသည် OnePlus6ဖန်သားပြင်တွင်ပြproblemsနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သုံးစွဲသူများနှင့်ပြproblemsနာများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
9 GB နှင့် 128 GB ရှိ Samsung Galaxy Note 512 ၏စျေးနှုန်းကိုပေါက်ကြားခဲ့သည်
ယခုအခါတွင်အင်ဒိုနီးရှားသို့ရောက်ရှိလာမည့် Galaxy Note9၏စျေးနှုန်းနှင့်အရောင်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီဖြစ်သည်
သြဂုတ်လ ၁ ရက်တွင်ဂုဏ်ပြုသောအထူးအထူးထုတ်ဝေမှုဖွင့်သည်
The Honor Play Special Edition ကိုသြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ဖြန့်ချိမည်။ စျေးကွက်ထဲသို့ဤအထူးထုတ်ဝေမှု Honor ဖုန်းရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy Tab S4 ကိုသြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏တက်ဘလက်၏တင်ဆက်မှုရက်စွဲအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Moto Z3 ကိုသြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင်တင်ပြမည်
Motorola Moto Z3 ကိုသြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီမှရွေးချယ်သည့်တင်သွင်းသည့်ရက်စွဲအကြောင်းပိုမိုသိရှိပါ။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဝေဖန်မှုများရှိခဲ့သော်လည်း Pixel3XL သည်ဤနည်းပညာကိုလက်ခံကျင့်သုံးမည်ဖြစ်သည်
Case ထုတ်လုပ်သူများသည်အနည်းဆုံးလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်မည့် terminal အသစ်အသစ်များကိုအမြဲတမ်းပထမ ဦး ဆုံးအသုံးပြုခွင့်ရရှိသည်။ Google Pixel3နှင့် Pixel 3XL ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များကို case ထုတ်လုပ်သူများမှတစ်ဆင့်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။
Galaxy Tab S မျိုးဆက်သစ်ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်တော့မည်ဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်တွင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ Galaxy Tab S4 ၏ပထမ ဦး ဆုံးဗီဒီယိုပေါက်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း ဆက်လက်၍ အတည်ပြုသောဗီဒီယိုတစ်ခု ဒီဇိုင်းနှင့်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ၏ပျောက်ဆုံး။
လာမည့်တက်ဘလက် Samsung Galaxy Tab A2 XL ၏တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်
Galaxy Note9၏ပထမဆုံးမြှင့်တင်ရေးဗီဒီယိုများ
သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည် Galaxy Note9ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်မည်။
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ကိုဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌ဖြန့်ချိမည်
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ကိုဇူလိုင် ၃၀ ရက်တွင်တရုတ်၌တရားဝင်ရောင်းချမည် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်လျှို့ဝှက်ပြီးတဲ့နောက်စျေးကွက်ကိုဘယ်တော့ရောက်သွားမယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်။
Huawei မှအထောက်အပံ့မပြုသော VLC !! ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဗွီဒီယိုထဲမှာအဖြေပေးပါနှင့်အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ရှင်းပြပါ
VLC သည် Huawei နှင့်သဟဇာတမဖြစ်သောကြောင့်ထို application သည် Play Store တွင်ရပ်တန့်သွားသည်။ ဤအခြေအနေနှင့်ဖြေရှင်းနည်းကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
Honor Play သည်အိန်္ဒိယသို့အမေဇုန်အဖြစ်ရောက်ရှိမည်
The Honor Play သည်လာမည့်လတွင်အိန္ဒိယသို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီးယခုအခါ၎င်းသည် Amazon မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
Android Areo ၏ Galaxy A, C နှင့် J ၏အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုဒီဇင်ဘာလအထိရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကို Android ဗားရှင်းအသစ်များသို့အဆင့်မြှင့်ရန်အထူးကုမ္ပဏီများကကုမ္ပဏီတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဆမ်ဆောင်းသည်၎င်း၏ terminal အချို့ကို Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့်နေ့ရက်ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။
Google Pixel ရှာဖွေရေးဘားတွင်ပြaနာတစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဂူဂဲလ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများကိုသက်ရောက်သောဤ bug အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
အကယ်၍ သင် Mi A2 မိသားစုရဲ့အနိမ့်ဆုံး version ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်သင့်မှာ Lite နဲ့ Android One နှင့်မိုဘိုင်းဖန်သားပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေသော notch ရှိသည်။
Xiaomi Mi A2 သည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီး၊ နားကြပ်အတွက်အသံjackမရှိသော်လည်းကောင်းမွန်သောအလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သည်
Xiaomi သည်နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Xiaomi Mi A2၊ ငွေရေးကြေးရေးအတွက်အလွန်တန်ဖိုးကြီးသောဖုန်းကိုကမ္ဘာချီတင်ဆက်ရန်မက်ဒရစ်မြို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဒါက Galaxy Note9ကိုအညို၊ အပြာနဲ့အနက်ရောင်တွေပုံဖော်မှာပါ
နောက်ထပ်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပုံရိပ်ကို Galaxy Note9ရရှိနိုင်မည့်အရောင်သစ်များကိုတွေ့နိုင်မည့်နေရာတွင်စစ်ထုတ်ပြီးဖြစ်သည်
မကြာသေးမီလများအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်စမတ်ဖုန်းမဟုတ်သောပစ္စည်းတစ်ခုမှာ Galaxy Watch ကုမ္ပဏီ၏စမတ်နာရီဖြစ်သည်။ Galaxy Watch ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်မှာယိုစိမ့်မှုမှမဟုတ်ဘဲ Samsung ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တည်၏။
Samsung သည် Galaxy Note9နှင့် Galaxy Watch အတွက်ပူးတွဲအားသွင်းစနစ်ကိုမိတ်ဆက်မည်
သြဂုတ်လ ၉ ရက်တွင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung မှဈေးကွက်အတွင်းမှလူကြိုက်အများဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Galaxy Note9ကိုတရားဝင်တင်ဆက်လိုက်သည်။ dual charging base သည်သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့၏အလင်းရောင်ကိုမြင်နိုင်မည့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ထုတ်ကုန်အရေအတွက်ကိုထပ်မံဖြည့်တင်းသည်။ အတူတူပါပဲ။ မှတ်စု9နှင့်အတူ
၎င်းသည် Galaxy Note9၏ S Pen ၏လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ဖြစ်သည်
လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်က Galaxy Tab S4 ၏သတ်မှတ်ချက်များကိုဤကိရိယာ၏ firmware မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်တုပခဲ့သည်။ ၄ င်းတို့မှာ Galaxy Note9၏ S Pen မှပေးထားသောလုပ်ဆောင်ချက်အချို့ - Galaxy Tab S4 မှ ဖြတ်၍ စီစစ်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာပါ
Sony IMX 586: ၄၈ MP Sony အာရုံခံကိရိယာအသစ်
Sony IMX 586: 48 MP Sony ကင်မရာအာရုံခံကိရိယာ။ စက်တင်ဘာလတွင်ရောက်ရှိလာမည့်ဂျပန်အမှတ်တံဆိပ်မှအာရုံခံကိရိယာအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi ၏ဖုန်းများ MIUI 10 သို့ယနေ့အချိန်အထိ update လုပ်သည်။ မည်သည့်မော်ဒယ်များသည်စိတ်ကြိုက်အလွှာကိုအဆင့်မြှင့်တင်မည်ကိုအသေးစိတ်သိပါ။
ယခုနှစ်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် Galaxy S9 ရောင်းချမှုကျဆင်းခဲ့သည်
Galaxy S9 ၏ရောင်းအားသည်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင်ကျဆင်းခဲ့သည်။ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီရဲ့အဆင့်မြင့်အရောင်းအ ၀ ယ်တွေအကြောင်းနည်းနည်းထပ်သိချင်တယ်။